Ifulethi elikhanyayo eline-fireplace,i-sauna, ingadi & i-veranda - I-Airbnb
Ifulethi elikhanyayo eline-fireplace,i-sauna, ingadi & i-veranda
Sylt-Ost, Schleswig-Holstein, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sabine
Indlu yethu yesimanje, ekhanya kakhulu. Ikhaya elingu-70 mvele elinomlingiswa wendlu ngayinye likunikeza cishe. Indawo yokuhlala/yokudlela engu-40 mgin enekhishi elivulekile, indawo yokudlela kanye nendawo yokubasa umlilo, ikamelo lehhovisi, ikamelo leshawa, ikamelo elihlukile, ikamelo elikhulu, elimboziwe nge-sauna nengadi yethu evulekile. Ibhishi, inkaba yedolobha kanye nesiteshi sesitimela kuphakathi nebanga lokuhanjwa ngezinyawo emizuzwini engu-10-15, isitolo esikhulu esiseduze simayelana no-250M kanye nokuqashwa kwamabhayisikili cishe ku-800M. Izinja zamukelekile!
Inani lendawo yokuhlala lihlanganisa amasethi amabili welineni, okungukuthi ilineni yombhede, ithawula elingu-1 leshawa, ithawula elingu-1, umata weshawa ongu-1 kanye nethawula lezitsha elingu-1 umuntu ngamunye. Amathawula asebhishi ne-sauna kumelwe alethwe.
Indlu inamafulethi amabili, ngezikhathi ezithile sihlala efulethini elingenhla.
Ukusuka ephaseji elivamile ungena endaweni ehlukile yokungena efulethini lethu eliphansi, elikunikeza okulandelayo:
Ikhishi elivulekile elinakho konke:
- Isiqhingi sokupheka esine-hob ye-ceramic engu-5 kanye nohhavini
- Ifriji eliseceleni elinefriji nezithelo ezihlukene/ifulethi lemifino
- Umshini wekhofi we-Nespresso -
umshini wekhofi - I-microwave -
Indawo Yokuhlala/Yokudlela Yomshini Wokugeza izitsha:
- Itafula lokudlela labantu
abangu-6 - i-TV -
- I-Cloakroom - Ideski -
- I-shower yaphansi
- Umshini wokuwasha -
WC - Umshini wokomisa izinwele
- Umbhede olala abantu ababili onomatilasi olengayo kanye ne-topper (160x200cm)
- Ithala lokubuka ingadi
/ingadi, konke ukuze ukusebenzise:
lengadi labantu abangu-6 - I-Weber grill
- Isitofu sezinkuni esishisayo i-sauna
- Ingrown garden
1 indawo yokupaka
-	Amabhikawozi angaba
ngu-800M -	Ukuqashwa kwamabhayisikili cishe. 800M
-	Isitolo esikhulu (Aldi) cishe amamitha
angu-250 -	Isitolo esikhulu (REWE, Lidl, net) cishe amamitha angu-800
-	Isiteshi sesitimela/idolobha cishe amamitha angu-800
-	Ibhishi laseNtshonalanga cishe. 1.5 km
Elinye inothi elibalulekile:
Intela ye-spa kufanele ikhokhwe umuntu ngamunye ubusuku ngabunye ku-Sylt. Njengomnikazi wendlu, kufanele ngibhalise izivakashi zami nomasipala wase-Sylt futhi ngikwenzele ikhadi lesivakashi. Izindleko zentela ye-spa kufanele zikhokhwe kimi futhi ngaphambi kokufika.
-	Indawo yokubhaka cishe amamitha angu-800
-	Ukuqashwa kwamabhayisikili cishe. Amamitha angu-800
- Isiteshi sesitimela/idolobha cishe. 800M
-	West beach ca.
Atlankm Ibhishi liyinto okumelwe yenziwe kukho konke ukuvakashelwa kwe-Sylt, i-Goschrestaurant enyakatho yesiqhingi e-Low inikeza inhlanzi emnandi, i-Osteria (indawo yokudlela) e-Westerländer lapho ukhe wabona khona noma ukuvakashela isiqhingi ngebhasi usuka esiteshini.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho ngivame ukutholwa ngocingo, uma kungafanele ngitholakale, ngixoxe ebhokisini leposi noma ngithumele i-SMS noma uWhatsapp :-)
Hlola ezinye izinketho ezise- Sylt-Ost namaphethelo